Doodle Dash waa madal gacmeed sawir leh oo sheeko leh | Androidsis
Orod, bood oo ku dul boodboodkan gacanta lagu sawiray ee loo yaqaan Doodle Dash
Doodle Dash waa ciyaar orodyahan cusub oo aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay Android taasna waxaa lagu gartaa iyadoo gacanta lagu sawiro sida ay tahay. Orodyahanka saaxiibtinimada leh ayaa awood u yeelan doona inuu boodboodo oo uu boodboodo isagoo iska ilaalinaya inuu ku dhaco yaamayska oo ka tagaya barxad ilaa barxad.
Ciyaar ka mid ah dhammaystir aad u wanaagsan oo lagu daaweynayo wax ka badan taariikhda xiisaha leh ee taariikhda si aysan u noqon arcade fudud. Xaqiiqdii, waa inaan sidoo kale helnaa faahfaahin farsamo sida geedo yaryar oo u dhaqaaqaya markii halyeeygeena uu soo gudbo, ama sida uu u libdho markii uu si lama filaan ah u taabto dabka ka dhashay hillaaca. Aan ku gaadhno ciyaartan xiisaha leh iyo balwadda leh.
2 U bood oo ku dul istaag si aan joogsi lahayn Doodle Dash
3 Ciyaaraha kaladuwan
Doodle Dash waa casaan cusub gacanta lagu jiiday oo nagu casuumaya ciyaarta ugu horeysa si loogu raaxeysto barnaamijyada si otomaatig ah loo soo saaro markasta oo aan ciyaarno. Runtuna waxay tahay in jiilka heerka sidan oo kale ah ay aad u fiican yihiin oo si dhib leh looma seegin in gacanta lagu sameeyo.
Farsamo yaqaan waxaan ula jeednaa taas horumariyaha ayaa dhigay dhufto ee laftiisa iyo walxaha kale ee ciyaarta. Xaaladdan oo kale, waxaa loo qabtay si wanaagsan oo aan sahlaneyn in horumar la gaaro si aan aad ugu feejignaano kuwa khilaafsan ee isku dayaya inay naga dhigaan inaan luminno nolosha nolosha ka dib.
Waa sidaas waxaan leenahay 3 qof wadar ahaan si loo maareeyo jilaayaasheena saaxiibka ah, oo xitaa daqiiqadaha qaarkood dallad qaadan doona si aan loogu qoynin wajiha duufaankaas, si haddii aan u riixno dhinaca bidix ee shaashadda u jiido, iyo haddii aan sameyno dhinaca kale ayuu ka boodaa
U bood oo ku dul istaag si aan joogsi lahayn Doodle Dash
Sida aan sii wadno riixay hal dhinac ama kan kale ee shaashadda jilaayaasheena wuu ka boodayaa wax ka badan ama ka yar, sida marka uu rogrogo, isla waxbaa dhaca. Waa inaynu leenahay boodbood laba jibbaar ah oo munaasabado badan aan u isticmaalno si aan si hagaagsan ugu soconno.
Waxa kale oo jira a taxanaha xirfadaha iyo casriyaynta in aan ku heli karno lacagta qadaadiicda ah ee aan helno mar kasta oo aan ciyaarno. Xitaa inaan awoodno inaan kudarno qalbiyo badan ama aan adeegsano kartiyo kale oo nasiiya xoogaa dheeraad ah si aan usii wadno horumarka.
Waa runtaa dariiqa uu u fahmo kala sooca ayaa isaga siiya taas, waana xitaa daqiiqado badan xitaa waxaan wadi karnaa barafka jet si aan ula yaabno. Taasi waa sababta ciyaar kasta u dareento mid ka duwan sidii hore iyo dareen ah inuu doonayo inuu midba midka kale u ciyaaro.
Iyadoo aan kala sooc lahayn, haa taas waxaan ka heli qaar naafada ah ka badan kale sida marka aan ka soo dhacno buurta oo aan ka soo dhacno xagga sare si aanaan u xakamaynin inay ku sugnaan doonto barxad. Waana marar badan inaan markale sameyn doono si aan u dhicin oo aan u weyno nolol kale.
Doodle dash waa ciyaar aad u dhab ah muuqaal ahaan sawir gacmeedkaas iyo faahfaahintaas oo shaashadda u rogaya waayo-aragnimo muuqaal ah oo aan kugula talinno inaad ku raaxaysato. Xaqiiqooyinka sida dabeecadeena weyn ayaa baaba'aya markaan dabka taabanayno waa tusaale cad oo ah inaysan rabin inay soo qaataan ciyaar caadi ah.
Doodle Dash ayaa bilaash looga heli karaa Play Store markaa waad ogaan kartaa taariikhdeeda, inkasta oo ay ku qoran tahay Isbaanish haddana wax fikrad ah kama hayno haddii ay ku dambayn doonto tarjumidda. Iyo hadaad sawireysid ha moogaan ciyaartan kale.
Joogsi aad u wanaagsan oo la fuliyay ayaa jillaabanaya ilbidhiqsiga koowaad iyada oo ay ku sawiran tahay gacanta iyo qaabkeeda faahfaahin iyo yaab.
Sawirka gacanta iyo animations
Kala sooc la'aanta bay'adaha iyo heerarka
Hababka ciyaarta ee kala duwan
Awoodda lagu raaco barafka
Dib uga soo noqo kor si aad u lumiso naf
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Orod, bood oo ku dul boodboodkan gacanta lagu sawiray ee loo yaqaan Doodle Dash
Nubia Red Magic 6 waxay la imaan doontaa shaashad leh heer cusbooneysiin ka sarreeya 144 Hz
Samsung Health mar dambe la jaanqaadi mayso Android 7.0